Eleven Media စာမျက်နှာတွင် အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် ဝန်ကြီးများကို သဘောမကျကြောင်း Comment ပေး၍ရသော်လည်း ဒေါ်စုကို သဘောမကျကြောင်း Comment ပေးလျှင် Block လုပ် ~ Myanmar Express
Bandoola Ban : ဒေါ်စုကြည်ကို သဘောမကျလို့ မကျတဲ့အကြောင်းလေးကို Eleven မှာရေးမိပါတယ်...ငါ့ကိုပိတ်လိုက်ကြတယ်....အော်..Eleven..Eleven... လက်ရှိအစိုးရနဲ့သမ္မကိုမကောင်းပြောတဲ့ဟာတွေပဲ.. လက်ခံတာထင်တယ်Bandoola Ban : Eleven Journal ၀ယ်မဖတ်တော့ဘူး..ဒါပဲ!!!!!!!!!!!!!Mg Shindy : ဟုတ်တယ်မဖတ်ကြနဲ့..Ko Pauk : ဟုတ်တယ်ဗျ.... အစကကျွန်တော့်ပိုစ်ထဲကို.... news တွေပို့ပေးနေကျ..... အဆွေတော်လိုဘဲ... .ဒေါ်စုအကြောင်းရေးလိုက်တာ....... ခုမပို့ပေးတော့တဲ့အပြင်.....၄ ရက် Block လုပ်ခံရတယ်.......Bandoola Ban : ကျွန်တော်ပြောချင်တာက...ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒေါ်စုကို သဘောမကျ..မထောက်ခံတာအပြစ်လား??? ကျွန်တော့်လို မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့...လေ့လာမယ်...သုံးသပ်မယ်..ကိုယ်ကြိုက်မှ ကိုယ်ထောက်ခံမှာပေါ့ဗျာ....နော်Kg Lay Kg Lay : ရခိုင်အရေးအစကတော့ eleven က သတင်းတွေတင်ပေးသေးတယ်..ဒေါ်ဆု .ဆုလဲသွားယူရော ရခိုင်အရေးဘေးချိတ်ပြီး ဒေါ်စု ဆုသွားယူတာတွေ ပဲ ပလူပျံအောင် တင်တော့တယ်..ရခိုင်းအရေးထက် ဆုသွားယူတဲ့ အရေးက ပိုအရေးကြီးတယ် ထင်ပါ့Bandoola Ban : ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ဒေါ်စုကိုင်တွယ်ပုံကို ကျွန်တော်လုံးဝ သဘောမကျဘူး.. ရခိုင်ပြည်သားတွေ အပေါ်လစ်လျှူရှူ တဲ့သူ့ကို လုံးဝသဘောမကျတော့ဘူး... သူ့လူတွေကပြောတယ်. .ဒေါ်စုကအာဏာမှ မရသေးတာ ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲတဲ့.. သူအာဏာမရခင်ကတည်းက မြန်မာပြည်ကို ပိတ်စို့အရေးယူဖို့ သူနိုင်ငံတကာအစိုးရက သူ တိုက်တွန်းတယ်လေ...အားရပါးရကို သူတက်တက်ကြွကြွနဲ့ မြန်မာပြည်ကိုအရေးယူပိတ်စို့ရေးကိုလုပ်ခဲ့တာလေ...အခု ရိုဟင်ဂျာကိုလည်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူး.. ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေပါဆိုတာကို ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့မပြောသလို.. UNHCR ကိုလည်း သူဘာမှ တွန်းအားပေးတာမလုပ်ဘူး....ကဲ? ဒီပုံစံနဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်သေးတာတဲ့.......... ဒေါ်စု ရခိုင်ပြည်လာဖို့ထက် အနောက်နိုင်ငံတွေကိုသာပိုအလေးထားတဲ့သူပါKg Lay Kg Lay : မှန်တယ် ..ပြတ်သားလို့ မရဘူးလေ..အနောက် ရဲ့ စိုးမိုးချယ်လှယ်မှု့ ကိုခံနေရတဲ့ သူ ဆိုတော့ ...ပြတ်သားလိုက်ရင် လဲဒုက္ခ မပြတ်သားတော့လဲ ဒုက္ခ ဆိုတော့ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် နဲ့ ခေါင်းရှောင်သွားတာ လေKg Lay Kg Lay : သူ့ အရေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ..ဘာလို့ များ ရင်လေးသပ်ပြီး သားတို့ မနစ်နာအောင် အမေ လုပ်ပေးပါ့ မယ် လို့ ဘာလို့ များပြောသလဲမသိဘူးနော်...အခုမှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ် အဆင့်ရှိသူပါ ..သမ္မတကြီးတာဝန်ပါ လို့ ပြော မယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်အလုပ် ပဲလုပ် .လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ နာမည် ခံမနေနဲ့ တော့Bandoola : Ban ဒေါ်လာစားပြီးအိမ်ထဲမှာနေတာကို..လေးစား စရာကောင်းတဲ့အနစ်နာခံမှုလို့ပြောတာလား...ဒေါ်စု လုပ်လို့ အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်သွားတာလား......သူဘာလုပ်လို့လည်း?????Kg Lay Kg Lay : မနာလို မဖြစ်ပါဘူး...ရခိုင်အရေးသူနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့ ပါ ... လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ နာမည်ယူထားပြီးသူနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောနေတာ ...ဟဟဟ ရယ်ရတယ်...ခေါင်းရှောင်လားမရှောင်လား ကျွန်တော့မပြောလဲအကုန်သိပြီးသားကိစ္စပါ.. ဆက်သွယ်မှု့ ဧရိယာပြင်ပရောက်နေတဲ့ ခင်းဗျားတို့ ပဲမသိသေးတာ... ဒီတော့လဲ ကိုယ့်အရှိန် နဲ့ ကိုယ် လှိမ့် ပေါ့ဗျာ ....လေ့လာပေါ့ဗျာ...(သူ့ လိုဖြစ်စေချင်ရင်.).ဟဟမဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာ သူ့ လို တော့ ပြည်သူလူထုအတွက်ကျိုးမရှိတဲ့ ဆုတွေယူပြီးအနောက်နိုင်ငံအထင်ကြီး ပြီးရပ်တည်ချင်တဲ့ သူ .မြန်မာပြည်အရေးကြတော့ခေါင်းရှောင်ချင်တဲ့ သူ..နှမ်းလေးပဲဖြူးတတ်တဲ့ သူ ..သူ့ လိုတော့ မဖြစ်ပါရစေနဲ့ ဗျာ.ဟဟဟGypsy Jesus : ကျွန်တော်လးည်း KACHIN သီတင်းတစ်ခုမှာ စစ်တပ်နဲ့ဗမာမကောင်းကြောင်း ပုတ်ခတ်ထားလို့မှန်ရာမှန်ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်ကနေ ၀င်ရေးတာကျွန်တော်ကိုဘန်းလိုက်တယ် ကျွန့်တော်အထင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရေးတာတွေကိုသူတို ပိရိတ်သတ်တွေဖတ်လိုက်ရင် တစိတ်တဒေသတွေးစရာလေးတွေပေါ်လာ နိုင်တယ်လေဒါကြောင့်မို့ ဘန်းတာလို့ယူစတယ် (စစ်တပ်နဲ့လက်ရှိနိုင်ငံတော် အစိုးရကိုမိုက်မိုက်ရှိင်းရှိင်း ဆဲတာဆိုတာမျိုးကတော့အရးခံတယ်ဗျ) သီတင်းမီဒီယာတွေလုပ်နေပြီးတော့ ပုရိတ်သတ်အတွက်သီတင်း အမှောင်ချထားတာမျိုးကတော့မကောင်းပါဘူးဗျာMyanmar Express
Posted in: ဘာလဲဟဲ့ Eleven Media,ဘာလဲဟဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်
16 July 2012 17:03
EMG is just do for money. Nothig special. Unbalance suport er and they say media must free. But not fair.
irrawaddy also the same.
16 July 2012 18:40
သူတို့ Page မှာ CEO ဆိုတဲ့ဘဲနဲ့ ဝေဖြိုးဆိုတဲ့စောက်ရိုင်းလေး နှစ်ကောင်ကစပြီး ရုံးသန့်ရှင်းရေးသမားအထိ facebook အကောင့်ဖွင့်ပြီးကိုယ်သတင်းအောက်မှာကိုယ်ပြန်ပြီး အစိုးရ ကိုဝေဖန်ရေးတွေ ကွန်မန့်တွေပေးပြီး ပြန်ဆဲနေကြတယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲကောင်တွေပြောတဲ တိကျခိုင်လုံမှု မရှိသော Account အမည်အမျိုးမျိုး နဲ့ဝင်ရောက်ရေးသားသူတွေဘန်းတယ် ဆိုတာ ဒေါ်စုကိုဝေဖန်ရင်ပြောတာလေ။ အစိုးရကိုပြောတာဆိုရင် တော့ကြိုက်သလောက်ပြောပဲ။ သူတို့တောင်ကြားထဲက ဝင်ပြောပေးလိုက်သေးတာ။
16 July 2012 19:22
သူတို့တွေက ဒေါ်စုဟာလျှက်နေတော့ဝေဖန်တာပါရင်စိတ်ဆိုးပြီး မလျှက်ရမှာကြောက်လို့ ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ
ကျွန် တော် လဲ Block လုပ် တာ ခံ ရ ဖူး တယ်။ ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ရဲ့ အ ပြု အ မူ ကို နည်း နည်း ထောက် ပြ မိ လို့။ ELeven မှာ ကွန့် မန့် ရေး သား။ အဲ့ ဒါ နဲ့ မ သေ ချာ လို့ သူ ငယ် ချင်း တစ် ယောက် က လည်း ထက် ရေး သာ ဒီ အ တိုင်း ပဲ ဘလော့ လုပ် ထား တယ်။ စဉ်း စား ကြည့် ပါ ဦး။ စ တု တ် ထ မဏ်ဏိုင်း ကြီး က ဒီ လို ဖြစ် နေ တယ် ဆို တော့။ ခွဲ ခြား မှု တွေ ဖြစ် နေတယ်။ အ စိုး ရ ကို မ ကောင်း ကြောင်း ရေး တဲ့ သူ တွေ ဆို Block မ လုပ် ဘူး။ ဒီ တော့ ရှင်း ပါ တယ်။ ဒါ ဘက် လိုက် တဲ့ မီ ဒီ ယာ ဆို တာ။ MyanmmarExpress ရေ ဒီ မ တ ရား မှု ကို တော့ ။ ပြည် သူ တွေ သိ အောင် နည်း နည်း ထပ် ရေး ပေး ပါ ဦး ဗျာ။ ကျွန် တော် တို့ အား လုံး MyanmarExpress ကို ပဲ အား ကိုး ပါ တယ်။
16 July 2012 19:29
အမြဲတမ်းဖတ်နေတာ eleven က ဘယ်တော့မှမဖတ်တော့ဘူးစိတ်ချ တစ်ပတ် ၂၀၀၀ လောက်သက်သာတယ်.. မဖတ်ဘူးကွာ သတင်းရေး စားမနေနဲ့တော့ eleven ပါတီထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်တော့
မှန်ပါတယ် ငါတို့ ကိုဆို ဘလော့ပါလုပ်ထားပါတယ် မျိုးမစစ် မကိုဝေဖန်လို့တဲ့ ငါလိုးမသား သန်ထွဋ်အောင် မင်း တနေ့ သေရမယ်
16 July 2012 20:53
ကျနော်လည်းမနေ့ကမှ comment ပြန်ရေးလို့ရတာ ...ကြွားတာတော့ဟုတ်ဖူး.eleven မှာ ကျနော့်ကိုlikeလုပ်တဲ့လူများတယ်ဗျ... ကိုယ့်ကိုlikeလုပ် တဲ့မဒီလေးတွေကို ကြောင်ရတာ ..ဒီကောင်တွေကြောင့် ကိုယ့်မှာဂွင်ပိတ်သွားတယ်..... ဒီတစ်ချက်နဲ့တင် အားကြီးစိတ်ဆိုးတယ်...
17 July 2012 07:32
CEO Aung than htut is mad ready. Because he lost so much money with car trading. Now he will do informar to Thai national news paper. If security news gave them he will became jail prisoner. Last time Thet sin had to run away because they sold share to singtel ( singapore telecomnication) . Singtel is doing information with telecomunication behalf of west. So Indonesia , Ausi all got that proble. His brain is mad ready because he just see meat , not see hook.
17 July 2012 07:34
CEO will follow As Myat Khaing. Frog in well , they think theirself king off world.Smile to them.
ကျုပ်က eleven ရဲ့အမာခံပရိတ်သတ်ပေါ့ဗျာ။ ထွက်သမျှeleven အကုန်ဝယ်တယ်။ ပိတ်သွားတဲ့ international eleven တွေတောင်သိမ်းထားသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း eleven ကသတင်းသမားမပီသတော့ဘူး။ ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းတင်၊ စောင်ရေမရောင်းရမှာ တွက်ပြီးဆင်ဆာလုပ်လာတယ်။ ပြောရင်တော့ မြန်မာပြည်က မီဒီယာတွေအားလုံး ကိုယ်ပြောချင်တာပြောနိုင်အောင် ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာ ထောင်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်။ သတင်းသမား စစ်စစ်တွေမဟုတ်ဘူး။
အောင်မြင်မှုတွေ ရှိခဲ့သလို အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ ဒါတွေလည်း ကျနော်တို့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေက...